प्रचण्डजस्तो बुद्धिमान र आदरणिय अध्यक्षसँग मेरो केही समस्या छैन –पोखरेल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्डजस्तो बुद्धिमान र आदरणिय अध्यक्षसँग मेरो केही समस्या छैन –पोखरेल
February 28, Fri
प्रचण्डजस्तो बुद्धिमान र आदरणिय अध्यक्षसँग मेरो केही समस्या छैन –पोखरेल
फागुन ४ गते, २०७५ - १२:०८
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो आदरणीय र बुद्धिमान नेता भएको बताएका छन्।
प्रचण्डसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको र बीचमा खेल्न खोजिएको पोखरेलले संकेत गरेका छन्। एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पोखरेलले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड मेरो आदरणीय अध्यक्ष हो, उहाँको निवासमा म जान्छु, सञ्चो बिसञ्चोमा सँगै छु, उहाँहरु मेरो निकै राम्रो सम्बन्ध छ। कसले हल्ला गरिराख्या छ, म बुझ्दिनँ । हाम्रो मन र मत दुवै मिलेको छ। यसमा अनावश्यक हल्ला जरुरी छैन।’
पोखरेलले थपे, ‘प्रचण्ड भनेको सुझबुझ भएको अत्यन्तै बुद्धिमान नेता हो। म उहाँलाई आदर गर्छु। प्रचण्ड कमरेडले सधैं सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहनुभएको देख्छु। अहिले प्रधानमन्त्री फेर्नबारे कुरा गर्ने बेला भएको छैन। सरकारबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ला, यो मैले भन्ने कुरा होइन। सरकार र सरकारको भविष्यबारे कुनै अलमल छैन।’
भेनेजुयला प्रकरणबारे पोखरेलले थपे, ‘भेनेजुयला प्रकरणमा नेकपा चुकेको छैन। नेकपाको सचिवालयले भेनेजुयलाबारे आधिकारिक वक्तव्य जारी गरेको छ, त्यही आधिकारिक हो। प्रचण्डको वक्तव्यअनुसार नै सचिवालयको बैठक आएको हो। भेनेजुयलाबारे पार्टीमा कुनै विवाद छैन। सचिवालयले बोल्यो, सकियो।’
रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रचण्ड मेरो आदरणीय अध्यक्ष हो। मैले दुवै अध्यक्षलाई सम्मानका साथ हेर्छु। २ जना अध्यक्षहरुले बडो सुझबुझका साथ पार्टी अगाडि बढाइरहनुभएको छ। कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता आवेग उत्तेजनामा चल्दैनन्। हामी स्वतन्त्र देश हौं, हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीति छ। सरकार र पार्टीको सचिवालयको निर्णय हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार नै आएको हो, यसमा भ्रममा नपरौं।’
पार्टीको महाधिवेशन र नेतृत्वबारे नेता पोखरेलले भने, ‘महाधिवेशनको विषयमा त्यतिबेलै खुला छलफल गर्छौं। परिस्थिति, माग र सन्दर्भअनुसार नेतृत्वमा छलफल होला। प्रचण्ड र माधव नेपाल मभन्दा धेरै सिनियर नेताहरु हो, नवौं महाधिवेशनमा एमालेमा निर्वाचन भयो, त्यही भर्टिकली विभाजन गर्‍यो। तर, हामीले मिलायौं। फेरि पनि सहमतिमै मिलाउँछौं। महाधिवेशनको नेतृत्वबारे हामी त्यतिबेला नै वैज्ञानिक निर्णयमा पुग्छौं ।’
पार्टी एकताको प्रक्रियाबारे उनले भने, ‘पूर्ण भन्ने चीज कहीँ पनि हुँदैन। पार्टी एकता पनि पूर्ण भइसक्यो भन्ने छैन। तर, हामी त्यसैका लागि प्रयासरत छौं। हामीले हिजो आफ्नै अभ्यास गरेका छौं, त्यसका केही अवशेष छन्। तर, हामी नारायणी भइसक्यौं। हामी त्रिशुली र सेती छैनौं। फेरि सेती, फेरि गण्डकी हुन सम्भव छैन। हामी महासागर भइसक्यौं।’
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘नेपालमा संविधानसहित ३३९ कानून छन्। हामीले प्रणाली परिवर्तन भएको राजनीतिक घोषणा गर्‍यौं, संवैधानिक घोषणा गर्‍यौं, अब कानूनी घोषणाको प्रक्रियामा छौं। फागुन २० सम्म सबै कानून बनाइसक्छौं, सकेनौं भने विशेष व्यवस्था गर्छौं।’
सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा रहेको उनले दावी गरे। पोखरेलले भने, ‘सन् २०१७ को भ्रष्टाचारको आँकडा प्रस्तुत गरेर सरकारमाथि आक्रमण गरियो। त्यो ओली सरकारका पालामा भएको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले शून्य सहनशीलताको नीति लिनुभएको छ। भ्रष्टहरु कार्वाहीको दायरामा पनि आएका छन्। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा पनि हेरौं।’
वाइडबडी प्रकरणबारे पोखरेलले भने, ‘तपाईजस्तो पत्रकारले भ्रष्टाचारको खास कुरा बुझ्नुभएन। वाइडीबडीलाई पनि पूर्वाग्रही ढंगले व्याख्या गरियो। शेरबहादुरजीले भनेअनुरुप नै हामीले छानविन समिति बनाएका छौं। तपाईहरुले यसको श्रृङ्खलावद्ध अनुसन्धान गर्नुस्। कांग्रेसले न्यायिक आयोगको माग गर्‍यो, हामीले त्यहीअनुरुप आयोग बनायौं।’
उनले थपे, ‘वाइडबडी प्रकरणमा अहिले शेरबहादुरजी र अरु नेताहरु पनि मौन हुनुहुन्छ। यसको कारण अलि गहिरो देख्छु। उहाँहरु आयोगमा सहमत भएर हो कि अरु रहस्य छ ? छानविन आयोगले जे प्रतिवेदन दिन्छ, हामी त्यहीअनुरुप कार्वाही गर्छौं। मन्त्री मात्र नभएर महामन्त्री भए पनि कार्वाही हुन्छ।’
फागुन ४ गते, २०७५ - १२:०८ मा प्रकाशित
khabar dabali का अरु लेखहरु पढ्नुस्
इश्वर पोखरेललाई जनार्दनको प्रश्न –मन्त्रि नै नभएको मैंले कसरी निर्णय गरेँ ?
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एंव नेकपाका सांसद जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारले जारी गरेको नेपाल...
UPDATE परिवार नै सबै घाईते –मैनाली र बुहारीको अवस्था गम्भिर
काठमाडौं । नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली दुर्घटनामा परी गम्भिर घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परी...
सिपी मैनाली चढेको कार दुर्घटना –हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याईदै
काठमाडौं । नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनाली दुर्घटनामा परेका छन् । झापाबाट काठमाडौं आउने क्रममा...
राष्ट्रियसभा : ‘अरु हरुवा हुने वामदेव किन नहुने ?’ यसअघि नेकपाले ककसलाई बनायो ?
काठमाडौं । चुनावमा पराजित भएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाइएकोमा व्यापक आपत्ति...
यि हुन् बामदेवका ६ जवर्जस्ति ! सबै फेल !
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– १. डोल्पाबाट उम्मेदवार बन्ने पहिलो कोसिस मंसिर ०७४ मा बर्दियाबाट...
वामदेवलाई फेरि ‘ब्याक फायर’
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने तथा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान...
नेकपामा संविधान संशोधनको पहल : खासमा के भएको थियो बैठकमा ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रस्तावित भनिएको संविधान संशोधनको विषय यतिबेला...
विषय नपाएपछि कोट र टोपी मिलेन भन्दै विषय बनाएर हिँडेका छन् : ओली
पोखरा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकास...
कसले लग्यो बाँस्कोटाको सातवटा डायरी ?
काठमाडौं । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको दिन...
हेलिकप्टरमा देशको नक्शा अंकित केक बोकेर ओलीको जन्मथलो पुग्ने को हुन् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो ६९ औं...
बाँस्कोटा टेप प्रकरणमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएजसरी प्रचार गरियो : प्रधानमन्त्री ओली
यस्ता छन् दुई मन्त्रिपरिषद् बैठकका २८ निर्णयहरु (सुचीसहित)
अहिलेको विवादबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन्, हामी छिट्टै समाधान निकाल्छौं : प्रचण्ड
Update : सीपी मैनालीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो, थप उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पताल भर्ना
सरकारले अब डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ विकास कर लिने
आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा
पार्टीलाई विघटनको दिशामा जान नदिन गम्भीर हुनुपर्छ – नेता नेपाल
प्रधानमन्त्रीले देशकै अपमान गरेकोले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ : राजेन्द्र श्रेष्ठ
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ?
आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै : यस्तो छ कार्यसूची
राष्ट्रपति भण्डारीको सुदूरपश्चिम भ्रमण जारी, बैतडी र दार्चुलामा आज पनि सार्वजनिक बिदा
रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटना भएको एक वर्ष पूरा, पाथीभराको गोरुजुरेमा स्मृति पार्क बनाईने
यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान